laacib » Maxaa Iska Bedelay Tartanka Horyaalka Premier League Ka Dib Kulamadii 16aad Ee Xilli Ciyaareedkan Ee La Dheelay Isbuucaan?
Maxaa Iska Bedelay Tartanka Horyaalka Premier League Ka Dib Kulamadii 16aad Ee Xilli Ciyaareedkan Ee La Dheelay Isbuucaan?
Waxaa Sabtidii iyo shalay la ciyaaray kulamadii 16aad ee horyaalka Premier League iyadoo laacibkii hogaamineysa horyaalka ee Manchester City ay noqotay kooxdii faa’idada ugu weyneyd heshay dhamaan kooxaha waa weyn ee horyaalka Ingariiska isbuucaan.
Kooxda Pep Guardiola ayaa aheyd laacibkii kaliya ee guusha gaartay dhamaan shanta kooxood ee ugu waa weyn Premier League isbuucaan, waxaana ay hogaanka horyaalka ka dhigteen 11 dhibcood iyadoo kaliya la marayo kala bar xilli ciyaareedka.
Man City ayaa guul 2-1 ah shalay ku gaartay garoonka Old Trafford kulankii ay kula ciyaareen laacibkii deriskooda ah ee Manchester United, waxaana ay taasi ka dhigan tahay in Sky Blues ay hogaanka ku hayaan 46 dhibcood, iyadoo laacibkii ku soo xigta ee Manchester United ay leedahay 35 dhibcood.
Kooxda kaalinta 3aad ee Chelsea oo ka faa’ideysan laheyd guuldarada Man United ayaa iska qasaarisay fursadaas ka dib markii ay guuldarro 1-0 kala kulmeen laacibkii reer London ee West Ham taasoo la micno ah in Blues ay weli seddex dhibcood ka danbeyso United islamarkaana ay 14 dhibcood ka danbeeyaan laacibkii hogaanka heysa ee City. Farqiga sidaas weyn ayaana keentay in isbuucaan uu tababare Antonio Conte iclaamiyo inay ka hareen tartanka horyaalka.
Kooxda kaalinta afaraad ee Liverpool ayaa iyadana iska qasaarisay fursad ay kaalinta 3aad ku soo geli lahaayeen ka dib markii ay barbaro 1-1 kala kulmeen laacibkii deriskooda ee Everton. Reds ayaa haatan leh 30 dhibcood, waxaana ay labo dhibcoo ka danbeeyaan laacibkii kaalinta 3aad ee Chelsea iyagoo 16 dhibcood u jira laacibkii hogaanka heysa ee City.
Arsenal ayaa weli ku dhegan booska kaalinta shanaad oo ay isbuucii hore u dhaceen, waxaana ay ku hungoobeen isbuucaan inay kaalinta afaraad ku soo laabtaan ka dib markii ay barbaro ka tuugeen laacibkii Southampton oo marti loogu ahaa St Mary’s Staduim iyadoo ay ciyaartaas ku soo dhamaatay barbaro 1-1 ah.
Arsenal waxa ay leedahay 29 dhibcood waxa ay hal dhibic ka hooseeyaan laacibkii kaalinta afaraad ee Liverpool, waxaana ay 17 dhibcood u jiraan laacibkii hogaanka heysa ee Sky Blues. Waxaa kaalinta lixaad iyadana ku jirta Tottenham oo hal dhibic ka hooseysa Arsenal kuwaasoo isbuucaan 5-1 kaga soo badiyay Stoke City.
Horyaalka Premier League waxaa hadana la ciyaari doonaa bartamaha isbuuca iyadoo Manchester City ay u safri doonto 13ka bisha dalka Wales halkaasoo ay kula ciyaarayaan laacibkii Swansea, Man United waxa ay isla habeenka Arbacada soo dhaweyn doontaa laacibkii Bournemouth.
Chelsea waxa ay habeenka Talaadada u safreysa laacibkii Huddersfield, halka Liverpool ay habeenka Arbacada garoonka Anfield ku soo dhaweyn doonto laacibkii West Brom, Arsenal ayaa iyadana isla habeenkaas waxa ay u safri doonaan laacibkii ay isku magaalada yihiin ee West Ham.